Rakhiis Rakhiis qaybo aluminium daawaha ah warshad iyo alaableyda | Ouzhan
Daawaha Aluminiumku wuxuu u dhintaa qalabka loo yaqaan "aluminium"
Qaar ka mid ah aluminiumyada aluminium ayaa lagu daaweyn karaa kuleylka si loo helo sifooyin farsamo oo wanaagsan, astaamo jireed iyo iska caabbinta daxalka. Ouzhan wuu habeyn karaa alaabada aluminium ee alaabooyinka u dhinta si waafaqsan shuruudahaaga iyo sawiradaada. Meelaha codsigiisa waxaa badanaa loo adeegsadaa elektarooniga, gawaarida, mootooyinka, qalabka guryaha iyo qaar ka mid ah warshadaha isgaarsiinta, qaar ka mid ah alaabooyinka aluminium tayo sare leh oo leh waxqabad sare, saxnaan sare, iyo adkeyn sare ayaa sidoo kale loo isticmaalaa warshadaha leh shuruudaha sare sida weyn diyaaradaha iyo maraakiibta. Isticmaalka ugu weyn wali wuxuu ku jiraa qaybaha qalabka qaar.
Faa'iidooyinka aluminium Ouzhan daawaha dhinta
- Xoog xoog u shubid iyo adkaanta dusha sare
OEM kartoo daawaha aluminium adeegga shubay dhinta-Shiinaha Shanghai aluminium daawaha qaybo shubay dhiman saaraha
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, saxsanaanta aluminium-darrada sare ee dhinta-tuurista oo leh tayo xasilloon oo la isku halleyn karo ayaa laga shaqeyn karaa. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka hawlgalku waxay xaqiijin karaan soosaarka saxda ah ee aluminium aluminium qaybo farsamo ahaan u dhinta. Intaa waxaa dheer, alaabada aluminium ee alaabada dhinta-tuurista ayaa si adag loo waafajiyay heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan ah oo loogu talagalay aluminium qaybo ka mid ah dhinta-tuurista macaamiishayada qiimaha leh.
Meesha isticmaalka aluminium ee qaybaha dhinta-shubka dhinta
Qalabka qalabka (aluminium aluminium ah oo dhinta-tuur) ayaa loola jeedaa qaybaha mashiinka ama qaybaha ka samaysan qalabka, iyo sidoo kale qaar ka mid ah alaabta qalabka yaryar. Waxaa loo isticmaali karaa kaligaa ama gargaar ahaan.
Sida qalabka qalabka, qaybaha qalabka, qalabka maalinlaha loo isticmaalo, qalabka dhismaha, iyo agabka amniga. Badeecadaha qalabka yar yar badankood ma ahan alaabada macaamiisha ee ugu dambeysa. Taabadalkeed, waxaa loo isticmaalaa sida waxsoosaarka waxsoosaarka warshadaha taageeraya, badeecadaha nus dhammaadka ah, iyo aaladaha loo isticmaalo habka wax soo saarka. Kaliya qayb yar oo ka mid ah waxyaabaha maalinlaha ah ee loo isticmaalo qalabka (qalabka) waa aaladaha macaamiisha ee lagama maarmaanka u ah nolosha dadka.
Faa'iidooyinka Ouzhan Aluminium Dhimashada Adeegga
- Dhammaan alaabada saxda ah ee aluminiumku waxay u dhintaan baaritaanno tayo leh oo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro si loo soosaro qaybo sax ah oo aluminium ah.
Hore: Naxaas Custom qaybo shubay dhiman
Xiga: Ridaya daawaha aluminium shubay dhinta